Brilliant Tips for How to Make Bubble Tea - Yangon Thu Michelle Video
Activities, Video Oct 26, 2018
In this week, I’m gonna share brilliant tips for how to make bubble tea for yourself. Believe me, it’s so easy and tasty. ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေက စားလို့တော့ကောင်းပါရဲ့။ တခါတလေညစ်ပတ်တယ်၊ စားရတာ စျေးကြီးတယ်၊ လူအများအတွက်ဝယ်မယ်ဆို မတန်ဘူး ထင်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည်က တစ်ခွက် ၁၅၀၀ အောက်ထစ်ပဲ။
သူငယ်ချင်း ငါးယောက်လောက်ယောက်ရင် တော်တော်စျေးပေးရပြီ။ ဒါကြောင့် မီရှဲကြိုက်တဲ့ ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည်ဖျော်နည်းကို Angela’s Diary မှာဖျော်နည်းတင်ပေးထားတာတွေ့လို့ အန်ဂျယ်လာကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး သူနဲ့တူတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးဖျော်သောက်ကြတယ်။ တာရှည်ခံဆေးတွေ မပါလို့ စိတ်ချလက်ချ သန့်သန့်လေး သောက်ရတယ်။
၁ – ပီလောပီနံမှုန့်
၂ – သကြားညို (တခြားသကြားသုံးရင် ပုလဲလုံးတွေက ဖြူကုန်တယ်၊ အကျက်လဲ ကြာတယ်)
၃ – လက်ဖက်ခြောက်အချိုခြောက်
၄ – နွားနို့ (ဆိုင်တွေမှာက နို့မှုန့် သုံးတယ်)
ပြုလုပ်နည်း (၂ယောက်စာ) ပုလဲအရင်လုပ်မယ်
၁ – သကြားညို ၃ဇွန်း ကြိုပါ။ ရေနဲနဲထည့်ပါ။ (ဗီဒီယိုထဲကလောက် နဲနဲပဲနော်)
၂ – သကြားအကုန်ပျော် အခဲမကျန်ပဲ ဆူလာရင် ပီလောပီနံမှုန့် ၂ဇွန်းထည့် မွှေပါ။ မွှေလို့ အရည်ကျဲနေသေးရင် ပြစ်သွားအောင် နဲနဲချိန်ဆပြီးထပ်ထည့်ပါ။
၃ – ပြစ်သွားရင် အိုးပေါ်ကချ၊၊ အလုံးလုံးရလွယ်နယ်ပါ။ မာနေသေးရင် ရေနဲနဲရောလို့ရတယ်။
၄ – ပြီးရင် မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးသလို အလုံးပိစိလေးတွေလုံးပါ။ ရလာတဲ့အလုံးတွေကို တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးမကပ်အောင် ပီလောပီနံမှုန့်ဖြူးထားပါ။ (အလုံးသေးရင် အကျက်မြန်တယ်။ စားလို့ပိုကောင်းတယ်။ အလုံးတွေ အရွှယ်ညီမှ အကျက်ညီမှာပါ။ အလုံးကြီးရင် စားလို့လဲ မကောင်းဘူး။ အရမ်းလဲဝါးရမယ်)
၅ – အကုန်လုံးပြီးရင် ကပ်နေတဲ့အမှုန့်တွေ ဇကာနဲ့စစ်ပြီး ရေနွေးထဲထည့်ပြုတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဆယ်မိနစ်လောက်ပြုတ်လို့ ပုလဲသီးအလယ်က ကြည်သွားပြီး စားလို့ ထုတ် ထုတ် ထုတ်နဲ့ ဝါးလို့ကောင်းရင် ဆယ်လို့ရပါပြီ။ မကျက်သေးရင် ငါးမိနစ်လောက်ထပ်ပြုတ်ပါ။
၆ – ရလာတဲ့ ပုလဲသီးတွေကို ရေအေးထဲခဏစိမ်ပြီးမှ ဆယ်၊ ပြီးမှ ဗီဒီယိုထဲကလို သကြားနဲနဲရောပေးလိုက်ရင် ရယ်ဒီပါပဲ။
၁ – အချိုခြောက်ထည့်၊ ရေထည့်၊ ဆူလာအောင်ကြိုပါ
၂ – အနံ့မွှေးလာရင် နို့ထည့်လိုက် … ဆူအောင်ထပ်ထား
၃ – ဆူသွားရင် ကော်ဖီစစ် ဒါမှမဟုတ် ဇကာနဲ့ လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ စစ်လိုက်ရင် ရပြီ အပေါ်ကနှစ်ခုရောလိုက်ရင် ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည် ရရော … အားလုံး အရသာရှိရှိသောက်လို့ရပါပြီ။
ဖျော်တဲ့အချိန်ပြောနော် … လာတောင်းသောက်မယ်။
I’m one of the bubble tea fan and love to drink always. I found one of my friend’s blog, she is doing bubble tea for herself and share about it. I learn from her about his tips and tricks and would like to share to you all from both of us. This is Dot It Yourself video, may be you have better techniques. Share your opinion and your experiences here. I am looking forward to receive from you. Thanks for watching, and don’t forget to subscribe my channel.